🥇 ▷ Samsung-kii ugu horreeyay ee leh kamarad saddex-gees ah wuxuu noqon karaa Galaxy A 2019-ka cusub ✅
Samsung-kii ugu horreeyay ee leh kamarad saddex-gees ah wuxuu noqon karaa Galaxy A 2019-ka cusub
Ruqsadda kastamka ee kamarad saddex-geesood ah ka Huawei iyo P20 Pro waxay ka xanaajiyeen xiisaha iyo hal abuurka jawiga farsamada, gaar ahaan guryaha Aasiya. Kuwaas waxaa ka mid ah Samsung, oo bilihii ugu dambeeyay u muuqday mid xiiseeya tikniyoolajiyadan oo laga yaabo inay bilawdo isticmaalka sanadka soo socda.
Waxaa la yaab leh, tuhmanayaasha ugu horeeya ee loo adeegsado kamaradaha gadaal ee seddex-xagalka ah ma ahan kuwa ugu sarreeya taxanaha S iyo xitaa kuwa kuwa kala duwan ee Xusuusta. Sida laga soo xigtay wararka xanta ah, sheekadan cusub ayaa laga yaabaa inay ku koobnaato moodooyinka cusub Galaxy A 2019, telefoonada casriga-dhexe ee noqon lahaa qalabkii ugu horreeyay ee Samsung ee tijaabiya.
Waxaa laga yaabaa, qaadashada kamarad saddex-geesood ah oo taxanahan noqon doonta tijaabin imaatinka teknolojiyaddan sidoo kale on Galaxy S10, kaas oo sidoo kale waa inuu taageero u helo akhristaha farta qoraalka ka yar bandhigay iyo astaamaha kale ee gaar ah.
AKHRISO: Galaxy S10 waxaa dhiirrigaliyay Huawei P20 Pro
Waqtigan xaadirka ah, waxaan runtii rabnaa inaan fahamno sida moodooyinka cusub ee taxanaha ah ee loo yaqaan ‘Galaxy A 2019’ loo sameyn doono, taas oo aan ilaa hadda u muuqan inay wali si weyn u tixgalinayaan xanta. Laga yaabee in wararka ku saabsan jiritaanka seddexda optics-ka ee jirka gadaashiisa ay daneyn weyn siin doonaan aaladahaan, sidaa darteed aan filan karno warar badan oo soo socda toddobaadyada soo socda.